Conspiracy - Sandal shaped jewels- Akpụkpọ Ụkwụ Okomoko - Imewe Mmewe
Akpụkpọ Ụkwụ Okomoko
Akpụkpọ Ụkwụ Okomoko Ejiri usoro Gianluca Tamburini nke "akpụkpọ ụkwụ / nwere ụdị akpụkpọ ụkwụ", nke a na-akpọ Conspiracy, bụ nke a hibere na 2010. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-agbakọ ụzụ na teknụzụ. A na-eme ikiri ụkwụ na ụkwụ site na ihe ndị dị ka alluminium dị fechaa na titanium, wich na-etinyere n'ụdị ọkpụkpụ. A na-ahụzi silhouette nke akpụkpọ ụkwụ site na obere nkume / dị oké ọnụ ahịa na ihe mkpuchi ndị ọzọ. Teknụzụ dị elu na ihe ndị dị nkọ na-etolite ihe ọkpụkpụ ọgbara ọhụrụ, nwere ụdị akpụkpọ ụkwụ, mana ebe mmetụ na ahụmịhe nke ndị omenkà nka Italiantali ka dị.
Aha oru ngo : Conspiracy - Sandal shaped jewels-, Aha ndị na-emepụta ya : Gianluca Tamburini, Aha onye ahịa : Conspiracy by Gianluca Tamburini.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
Akpụkpọ Ụkwụ Okomoko Gianluca Tamburini Conspiracy - Sandal shaped jewels-